Dictionnaire malgache et encyclopédie de Madagascar : rajaonariveloafonantongona
Entrée Rajaonarivelo: Afon' Antongona
Auteur Rajaonarivelo Auguste, 1959/07
Texte Donak'afon'inona iry tazako andrefana iry? Filazana jirika ho tonga sa hain-tanety tra-maraina? Fambara loza ho avy ve sa haitraitran' ankizy tia lalao?
Raha jirika ho avy iny, hangoronako lamba dieny izao sao maningoera ny aiko. Raha ankizy tia somonga kosa, hihomehezako malakolako, fa raha ngita saro-bahana.
Tsy filazana jirika ho tonga iny na haitraitran'ankizy tia lalao, fa ny omaly tsy miova mahavalaka, ary ny volan'ny kankafotra tsy mahataitra.
Raha fanahy mivaona no tsy azom-panafana ahitsy, ka mandia tany naleha lalandava toa fanoron-dratsy, dia izany no " efa ho lava toa ny afon'Antongona " , ka na hidonaka na hamoa-tsetroka, dia tsy hanaitra mpitazana intsony.
Raha ny hataka andron'ny mpitrosa na ny ampitso lavan'ny kamo no tsy azon-kevitra hofoanana, dia ireny no " efa ho lava toy ny afon'Antongona " , ka na hirehitra mandra-maraina na hiroborobo mandoaka ny alina, dia tsy hampiherika mpitsinjo akory!
Koa mahaiza lahy mandamina ny fiainana, fa ny hataka andro lava sy ny omaly tsy miova ary ny volan'ny kankafotra dia mahamonaina mpijery, mampatory mpitsinjo fa " efa ho lava toy ny afon' Antongona " .